राष्ट्रिय ब्रा दिवस
अंग्रेजी नयाँ वर्षमा मनाइने नेपालको एउटा राष्ट्रिय दिवस हो, टोपी दिवस । टोपीमाथिको यो दिवस नेपालमा मनाउन थालिएको धेरै वर्ष भएको छैन । तर, यस वर्षको टोपी दिवस भने विशेष विवादमा प¥यो । किनभने मानिसले लगाउने विभिन्न वस्त्र जस्तैः टोपी पनि एउटा वस्त्र हो । अब वस्त्रकै दिवस मनाउने हो भने टोपी दिवस मात्र किन ? धोती दिवस किन नमनाउने ? यस्तो प्रश्न पनि उठ्यो… विस्तृत समाचार
फोरजी र चोरजी
नेपाल टेलिकमले अब फोरजी सेवा शुरु गरेको छ । यसो गर्दा अब हाम्रो मोबाइल र इन्टरनेट खुब फास्ट चल्छ रे ! फाष्ट चल्नु राम्रै हो । मोबाइल मात्र फाष्ट चलेर के गर्नु, देशको विकास भने फाष्ट चलेको होइन । तीन वर्षमा बनि सक्नुपर्ने परियोजना १० वर्ष पुग्दा पनि आधी काम सकेको हुन्छ । विकासको काममा पनि यस्तै फोरजी प्रणाली राख्न पाए हुन्थ्यो । बरु फोरजी… विस्तृत समाचार
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सम्पत्ति देखेर मानिस चकित भएका छन् । सम्पत्ति देखेर भन्दा पनि सम्पत्ति नदेखेर चकित भएको भन्दा शायद ठीक होला । उहाँले हालै आफ्नो सम्पत्ति विवरण जो सार्वजनिक गर्नुभयो, त्यसमा विवरण मात्रै छ, सम्पत्ति केही छैन । त्यसपछि मानिसले प्रश्न उठाउन थाले, सम्पत्तिचाहिँ खोइ त ? पहिले–पहिले कमरेड मानिस भन्ने गर्थे, प्रचण्डसँग यत्रो सम्पत्ति कहाँबाट आयो हँ ? अहिले उहाँको सम्पत्ति विवरण हेरेपछि… विस्तृत समाचार
सरकारले भर्खरै नयाँ नियम निकालेको छ, अबआइन्दा कसैले पनि गुडिरहेको गाडीबाट फुत्त–फुत्त फोहोर फाल्न पाइँदैन । यदि, फालेको भेटिएमा समातेर जरिवाना तिराइनेछ । नयाँ नियम आएपछि गाडी चलाउने चालक र खलासी सतर्क भएका छन् । कसैले फ्यात्त फोहोर फालिदियो भने जरिवाना । स्थिति खराब छ । यही अवस्थामा मलाई कहाँबाट हो खलासी प्रचण्डले चलाइरहेको गाडीको याद आयो । श्री प्रचण्ड खलासी नै भए पनि अहिले… विस्तृत समाचार
ख्वै, केही दिएन
महाभूकम्पले जे–जति ध्वस्त बनाएको हो त्यसको पुनर्निर्माण गर्न भनेर सरकारले एउटा प्राधिकरण गठन गरेको थियो । सुन्नमा आएको छ, प्राधिकरणका इञ्जिनियर यतिवेला पुनर्निर्माणको काम छाडेर हडतालतिर लागिरहेका छन् रे ! हडताल इञ्जिनियरको माग रहेछ, सरकारले हामीलाई भत्ता दिएन । उता, भूकम्पपीडितको माग छ, यो पुनर्निर्माण प्राधिकरणले हामीलाई राहत दिएन । जम्मै पीडितलाई राहत दिने भनेर सरकारले कार्यक्रम नै बनाएको थियो । तर, प्राधिकरणले त्यो बाँडिदिएन… विस्तृत समाचार
लोडसेडिङ नभएर दुःख
राजधानीमा अचेल लोडसेडिङ छैन । त्यसो त राजधानीमा सुखशान्ति पनि छैन । चैन छैन । सुरक्षा छैन । शुद्धता छैन । तर यो जम्मै ‘छैन’ हरूलाई राजधानीले पचाइसक्यो । पचाउन नसकेको चाहिँ ‘लोडसेडिङ छैन’ मात्रै हो । अहिले जता हेरे पनि यही कुरा छ– आहा, अहिले त लोडसेडिङ छैन है ? राजधानीमा लोडसेडिङ गएपछि खुशियाली आएको छ । लोडसेडिङ गयो, खुशियाली आयो । लोडसेडिङ गएर… विस्तृत समाचार
आखिर माओवादीको सबैभन्दा ठूलो आकर्षण पनि फुस्केर गयो । अब त्यो पार्टीप्रति मेरो कुनै आस्था रहेन । अध्यक्ष प्रचण्ड त्यत्रो बिग्रँदा पनि रेखा थापा त छिन् नि भनेर बसिरहेको थिएँ । अब रेखा थापाले पनि पार्टी त्याग गरेपछि मैले पनि माओवादी त्याग्ने सोचिरहेको छु । यो मैले होइन माओवादीकै एक अत्यन्त आस्थावान् कमरेडले हिजो मलाई भनेको । बरु बाबुराम भट्टराईले पार्टी छाड्दा उनी यति निराश… विस्तृत समाचार
‹ First Newer 13 14 15 16 17 Older